Samsung Neon - Ai Virtual nnyemaaka | TeraNews.net
Samsung Neon - AI Virtual nnyemaaka
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 23.12.2020
N'ikpeazụ, ndị dike anyị na-ahụ maka ụlọ ọrụ achọtala oge maka ịba nnukwu n'ọdịnihu. Enweghị ike ịkpọ ya ma ọ bụghị. Samsung ọhụrụ Neon technology bụ AI-kwadoro mebere nnyemaaka. Cheta ihe nkiri na egwuregwu kọmputa, ebe ihe osise nke onye nwere ike mkparịta ụka n'ịntanetị pụtara na ngosipụta desktọọpụ. Koreankpụrụ # 1 Korea enwewo ihe ịga nke ọma n'ime ka nkà na ụzụ a bụrụ eziokwu. Na CES 2020, Samsung gosipụtara ịrụ ọrụ nke ọrụ nke ọdịnihu.
RGB backlit LCD ihuenyo. Cool Hi-Fi acoustics. Igwe okwu mma. Nnukwu mkpịsị aka mkpịsị aka. Ihe ndị a niile bụ ntakịrị ihe ndị nrụpụta ọ bụla nke China nwere ike mejuputa. Akụkụ bụ isi nke usoro Samsung Neon bụ ụbụrụ. Ma ọ bụ kama nke ahụ, ọgụgụ isi nke nwere ike ịza nke ọma maka arịrịọ ndị ọrụ niile.
Na ebe a, ndị mmepe nke nchegbu South Korea jisiri ike nweta ọmarịcha teknụzụ. AI nwere ikike ọ bụghị naanị ịnọgide na-enwe mkparịta ụka na onye na-eme mkparịta ụka na isiokwu ahọpụtara. Na gestic, na-egosi ọdịdị ihu nke onye dị adị n'ezie.
Gịnị bụ ọdịnihu nke Samsung Neon - gịnị kpatara eji chọọ ya
Ọ bụrụ na anyị laghachi na mmalite (ihe nkiri na egwuregwu), mgbe ahụ atụmatụ a ga-abụ akụkụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ ọrụ nzuzo. Samsung Neon bụ onye ndụmọdụ zuru ezu nwere ike idozi nsogbu ọ bụla onye ọrụ. Ihe dị iche iche nke ọrụ a bụ n'iitationomi nkwurịta okwu na onye dị ndụ. Nleta anya, site na echiche nke akparamaagwa, na-eme ka nlebara anya na ntụkwasị obi dịkwuo elu.
N’enweghi obi abụọ, ihe owuwu dịka ụlọ akụ, ụlọ ọrụ ego, ụlọ ọrụ ndị ọha na eze, ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ oloko chọrọ ka Samsung Neon mejuputa ya. Arụ ọrụ nke usoro ahụ na-enye gị ohere ịgụ kaadị akwụmụgwọ, kwụọ ụgwọ. Mee ụfọdụ omume mgbe ejiri akara aka mara onye ọrụ. Echiche dị oke, yana mmejuputa ya. Ihe niile dabere na agụụ nke Samsung, nke kwesịrị ikwupụta ọnụahịa nke okike ya.
Amụma Bitcoin ruo na njedebe nke afọ
Harley-Davidson Terminator Auction
Mpempe akwụkwọ Egwuregwu MSI DS4100: Nyocha, Njirimara
Ebe a na-egwu mmiri kacha sie ike n’ụwa